The Irrawaddy's Blog: န၀ရတ်လက်စွပ်စီရင်နည်း
န၀ရတ်ကိုးပါးဆိုသည်မှာ ကျောက်မျက်ရတနာကိုးမျိုးကို ခေါ်ဆိုပါသည်။ န၀ရတ်ဟူသည် န၀ရတန ဟူသော ပါဠိမှလာ၍ ရတနာကိုးပါးဟု အနက်ရသည်။ န၀ရတ်ကိုးပါး ချယ်ထားသော လက်စွပ်ကို န၀ရတ်လက်စွပ် ဟုခေါ်သည်။ က၀ိလက္ခဏာ သတ်ပုံကျမ်းတွင် မျက်စုံလည်းသတ်၊ န၀ရတ်၊ စီခတ်အမွန်းတင် ဟုတွေ့ရသည်။ လူတို့သည် န၀ရတ်လက်စွပ်ကို ကျက်သရေမင်္ဂလာနှင့် ပြည့်စုံသည်ဟု ယုံကြည်၍ ဆင်ယင်လေ့ရှိသည်။ ရှေးပဝေဏသီကပင် ကျောက်မျက်များ၏ ထူးခြားသော တန်ခိုးများရှိသည်ဟု လူတို့ အယူရှိခဲ့ကြသည်။ န၀ရတ်တွင် အပါအ၀င် ကျောက်မျက်ရတနာ တစ်ပါးပါး၏ တန်ခိုးအာနိသင်မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်ဟု ယူဆကြသည်။
မဏိ နီလာ - မေတ္တာကဲချုပ်၊ ဂေါ်မိတ် ခွန်အား
န၀ရတ်လက်စွပ်သည် မြန်မာ လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်းတွင် ရွှေခွက်(သို့)ငွေခွက်ထဲတွင် န၀ရတ်ကိုးပါး၊ နံသာမျိုး ငါးပါးသွေး၍ (သို့မဟုတ်) ရေမွှေးများထည့်၍ သတို့သား၊ သတို့သမီးတို့၏ထိပ်၌ သပြေပန်းခက်ဖြင့် ပက်ဖြန်း၍ လက်ထပ် ထိမ်းမြားခြင်းကို ပြုလုပ်လေ့ရှိသည်။
1. ပတ္တမြား (Ruby)
2. မြ (Emerald)
3. စိန် (Diamond)
4. ကြောင် (Cats eye)
5. နီလာ (Sapphire)
6. ဂေါ်မိတ် (Zircon)
7. ဥဿဖယား (Topaz)
8. သန္တာ (Coral)
9. ပုလဲ (Pearl) ဖြစ်သည်။
စိန်ကို ကျောက်မျက်တို့၏ ဘုရင်ဟုခေါ်သည်။ ကျောက်မျက်အမျိုးပေါင်း ၁၂၀ခန့် ရှိသည့်အနက် စိန်သည် အမာဆုံးသော ကျောက်မျက်ဖြစ်သည်။
ယင်းတို့အနက် စိန်၊ ပတ္တမြား၊ မြနှင့် နီလာတို့သည် အဖိုးအတန်ဆုံး ဖြစ်သည်။ နီလာနှင့် ပတ္တမြားသည် ကျောက်မျက်အမာ တစ်မျိုးထည်းပင် ဖြစ်သည်။ အရောင်အသွေးသာ ကွဲပြားသွားသည်။ ပတ္တမြားသည် သွေးကဲ့သို့သော အနီရောင်ရှိပြီး နီလာသည် တောက်ပသော အပြာရောင်ရှိသည်။
ပုလဲနှင့် သန္တာသည် တွင်းထွက်ကျောက်များ မဟုတ်ကြပေ။ ပုလဲကို ကမာ(သို့)မုတ်ကောင်၏ ကိုယ်တွင်းမှ ရ၍ သန္တာကို သန္တာကောင်များရှိသော သန္တာကျောက်တန်းများမှ ရရှိသည်။ ကြောင်ကို ကြောင်၏ မျက်လုံးနှင့် တူ၍ ကြောင်မျက်ရွဲ ဟုလည်း ခေါ်ကြသည်။ မြတွင်ကြည်လင် စိမ်းမြသော အရောင်ရှိသည်။ သို့သော် စိန်၊ နီလာ၊ ဥဿဖယားတို့လောက် မမာချေ။ ဂေါ်မိတ်သည် ကျောက်သလင်းနှင့် ရော၍ တွေ့ရတတ်သော ကျောက်မျိုးဖြစ်သည်။
မဏိသျှတ္တရ ရတနာကျမ်းလာ န၀ရတ်လက်စွပ်ပြုလုပ်နည်း။
န၀ရတ်လက်စွပ် ပြုလုပ်နည်း၌လည်း ပဉ္စမသင်္ဂါယနာတင် မင်းတုန်းမင်းတရားကြီး မြောက်စားချီးမြင့်ခြင်းကို ခံတော်မူရသော အဂ္ဂမဟာသေနာပတိ ၀န်ရှင်တော် အရာရှိ ယောမြို့စား ဦးဘိ်ုးလှိုင် ပြုစုရေးသားစီရင်တော်မူ သော ဥတုဘောဇနသင်္ဂဟကျမ်ှးင့် လောကဟိတရာသီ ကျမ်းတို့တွင်တစ်မျိုး ၊ မဏိသျှတ္တရခေါ် ရတနာကျမ်းတွင် တစ်ဖုံ နှစ်မျိုးကွဲနေသည်ကို တွေ့ရပေသည်။
ဥတုဘောဇနကျမ်းနျင့် လောကဟိတရာသီကျမ်း၌ န၀ရတ်လက်စွတ်ပြုလုပ်နည်းမှာ “ ပတ္တမြား ၊ စိန် ၊ ပုလဲ ၊ သန္တာ၊ ဂေါ်မုတ်၊ နီလာ၊ ကြောင်၊ ဥဿဖယား၊ မြစသည့် ကျောက်မျက်ရတနာ ကိုးပါးကို ပတ္တမြားအလယ် ၊ စိန်အရှေ့ အစဉ်အတိုင်းထား၍ လက်ယျာရစ်လှည့်ပြီးလျှင် လုပ်ရမည်။ ပြီးလျှင် သမ္မာဒေ၀ နတ်အပေါင်းတို့အား ပန်းပေါက်ပေါက်တို့ဖြင့် ပူဇော်ပသပြီးမှ ၀တ်ဆင်သော် ခပ်သိမ်းသော အပြစ်တို့ ကင်းကွာ၍ ၍မင်္ဂလာကျက်သရေ အပေါင်းနှင့် ပြည့်စုံပြိး ကောင်းချီးချမ်းသာ ရအံ့ဟု ဆိုလေသည်။
မဏိသျှတ္တရခေါ် ရတနာကျမ်းတွင် န၀ရတ်လက်စွပ် ပြုလုပ်နည်းမှာ တနင်္ဂနွေဒေါင့်မှာ သန္တာ ၊ အရှေ့တနင်္လာဒေါင့်မှာ စိန်၊ အရှေ့တောင်အင်္ဂါဒေါင့်မှာပုလဲ၊ တောင်ဗုဒ္ဓဟူးထောင့်မှာ ကြောင်၊ အနောက်တောင် စနေထောင့်မှာ ဂေါ်မုတ်၊ အနောက်ကြာသပတေးဒေါင့်မှာ မြ၊ အနောက်မြောက် ရာဟုထောင့်မှာ ဥဿဖယား၊ မြောက် သောကြာထောင်မှာ နီလာ၊ တိမ်တောင်အရပ် (၀ါ) အလယ်ဗဟိုတွင် ကိတ်ဂြိုဟ်အမှတ် ပတ္တမြားကို မြှုတ်၇မည်ဟု ဆိုပေသည်။
ဥတုဘောဇန သင်္ဂဟကျမ်းနှင့် လောကဟိတရာသီကျမ်းလာ န၀ရတ်လက်စွပ် ပြုလုပ်နည်း
န၀ရတ်လက်စွပ်ကို ဆင်မြန်းဝတ်ဆင်သော အခါ၌လည်း ရက်မြတ်ရာဇာ မင်္ဂလာအခါရွေး၍ ရတနာသုံးပါး မိဘဆရာသမား အထက်နတ်မင်းကြီးများ ၊ အထက်ပုဂ္ဂိုလ်များ နှင့် ကိတ်ဂြိုဟ်ပါ ဂြိုဟ်ကြီးကိုးလုံးကို ရှိခိုးပူဇော်ကန်တော့ပြီးမှ မြကို အတွင်းဘက် ၊ စိန်ကို အပြင်ဘက်ထား၍ ၀တ်ဆင်ရမည်။ ရက်ကောင်းရက်မြတ် မင်္ဂလာအခါမှာ ပန်းထိမ်ဆရာထံ အပ်နှံရမည်။ ပန်းထိမ်ဆရာကလည်း ရက်ကောင်းရက်မြတ် မင်္ဂလာအခါရွေး၍ မိမိကိုယ်ကို သန့်စင်အောင်ပြုပြီး ၀တ်ကောင်းစားလှများကို ၀တ်ဆင်ကာ သမ္မာဒေ၀ နတ်ကောင်းနတ်မြတ်များကို ကန်တော့ပေး၍ ပြုလုပ်သည်ဟု ဆိုသည်။
လက်စွပ်ပြုလုပ်ရန် စီစဉ်သောအခါ ပိတ်ဖြူ (သို့) သန့်ရှင်းသော နေရာပေါ်တွင် ကျောက်မြက်ကိုးပါးကို ခင်း၍ အစီအစဉ်အတိုင်း ဆီမီးအတိုင်းထားကာဆီမီးဖယောင်းတိုင် တစ်တိုင်ကျစီ ပူဇော်ထားရမည်ဟု မဏိသျှတ္တရ ကျမ်းတွင် ညွန်းဆိုထားပေသည်။
ထို့ပြင် ကျောက်မျက်ကိုးပါးကို ခင်းကျင်းရာ၌လည်း အောက်ပါခံရမည့်ပစ္စည်းများကို ဤသို့ ဖော်ပြထားပြန်သည်။
၁။ ပတ္တမြားအောက်တွင် ကတိုးနှင့် ကြာနီပွင့်ကို အောက်ခံထားရမည်။
၂။ စိန် အောက်တွင် ငွေနှင့် ဇာတိပ္ဖိုလ်ကို ထားရမည်။
၃။ ပုလဲ အောက်တွင် ဖုမ္မသိမ်နှင့် ခရုသင်းမှုန့် အောက်ခံထားရမည်။
၄။ ကြောင် အောက်တွင် ကြက်မောက်နီပွင့် အောက်ခံထားရမည်။
၅။ ဂေါ်မုတ် အောက်တွင် မာလာပွင့်ကို ထားရမည်။
၆။ မြ အောက်တွင် ကတိုးပွင့်နှင့် လေးညှင်းထားရမည်။
၇။ ဥဿဖယား အောက်တွင် ကရမက်နျင့် အကျော်ကို ထားရမည်။
၈။ နီလာအောက်တွင် ပန်းရင်းကိုထားရမည်။
၉။ သန္တာအောက်တွင် ကတိုး ကြာနီပွင့်၊ စန္ဒကူးကို ထားရမည်။
န၀ရတ်လက်စွပ် လုပ်နည်းနှစ်နည်း ရှိသည့်အနက် မဏိသျှတ္တရခေါ် ရတနာကျမ်း လက်စွပ်လုပ်နည်းကိုသာ အများအပြား လုပ်ကိုင် ၀တ်ဆင်နေကြသည်ကို တွေ့ရသည်။
န၀ရတ်လက်စွပ် ၀တ်ဆင်ထားလျှင် မသန့်သောနေရာများကို မကိုင်တွယ်မိစေရန်နျင့် တရော်၊ ကင်ပွန်းနှင့် မကြာခဏ ဆေးကြောပေး၍ အမွေးနံ့သာများ ဖြန်းပေးရန် ဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီးများသည် လက်ယျာလက်က ၀တ်ဆင်ရမည်။ အမျိုးသမီးများ ကိုယ်လက်အင်္ဂါမသန့်သော အခါမ၀တ်ဆင်ရန်ကိုလည်း မဏိသျှတ္တရကျမ်းက ညွန်းဆိုထားပေသည်။
ကျောက်မျက်ရတနာ ကိုးပါးစီချယ်ပြုလုပ်ထားသော န၀ရပ်လက်စွပ် ၀တ်ဆင်ထားခြင်းဖြင့် အသက်ရှည်ခြင်း၊ မင်္ဂလာရှိခြင်း၊ ကျက်သရေရှိခြင်း၊ စုန်းပယောဂ ဘေးရန်ကို ဖျက်စီးနိုင်သည့်အပြင် အနုပီယဆေးဖြစ်၍ လူနတ်ချစ်ခင်သည်ဟု ရတနာကျမ်းများတွင် ဖွင့်ဆိုထားပေသည်။
ဂမ္ဘီရဆန်သော ဤန၀ရတ်လက်စွပ် စီးရင်နည်းကို သိသလောက် ကြားဖူးနားဝရှိသလောက် ၊ ဖတ်ဘူးမှတ်ဘူး လေ့လာဖူးသလောက် ပြန်လည် တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီထက်မက တိတိကျကျ ဃဃနန သိလိုကြပါက ရှေ့မီနောက်မီ နီးစပ်ရာ ရွှေပန်းထိမ်ဆရာကြီးများထံတွင် အနီးကပ်လေ့လာကြပါက ပိုမို၍ ပြည့်စုံနိုင်ပါကြောင်း စေတနာကောင်းဖြင့် တင်ပြပေးလိုက်ပါသည်။ ပိုက်ဆံများ ရှိလာလို့ကတော့ န၀ရတ်လက်စွတ် တစ်ကွင်းလောက် ၀ယ်ဝတ်လိုက်ဦးမယ်ဟူ၍ ကြုံးဝါးရင်း.........
ညွှန်း - ဟိန်းတင့်ဇော်၏ အင်တာနက်စာမျက်နှာ http://www.heintinzaw.com တွင် ဖော်ပြထားသော ဆောင်းပါး
ဗမာစကားမှာသိပ်မရှင်းလို့ပါ ဂေါ်မိတ်လား ဂေါ်မုတ်လားဗျ။ ကျုပ်တို့ကတော့ ပတ္တမြားလဲ မ၀တ်နိုင်ပါဘူး၊ ပတ္တနဲလည်း မ၀တ်နိုင်ပါဘူး။ ဒါမျိုးတွေက ၀န်ကြီးတွေ၊ သူဌေးတွေမှ ၀တ်နိုင်တာကိုး။ အရင်တုံးကဆို ပုဆိုးတွေရောင်းစားနေရပါတဲ့ဆိုတဲ့ ဦးခင်ညွှန့်တောင်ဝတ်သေးဗျ၊ သူခေတ်ကောင်းတုံးကပေါ့ဗျာ၊ ဇာတ်ထဲမှာဆိုလည်း ၀န်တွေဝတ်တာပေါ့။ ဘာတဲ့ အပေါ်မှာဆို နတ်ပြည်ခြောက်ထပ်၊ အောက်ကိုကြည့်ရင် ငရဲကြီးရှစ်ထပ်၊ ဘေးကို ကြည့်လိုက်ရင် အပေါင်ဆိုင်ကို တန်းလို့ဆိုတာ။ အဲဒီလိုမ၀တ်နိုင်လို့သာ ထမင်းမစားရဘူးဆိုရင်တော့ ကျုပ်တို့ငတ်သေတာကြာပေါ့ဗျာ။ ပြောပြတဲ့ဆရာကို ကျေးဇူးတင်တယ်ဗျာ။ ဒါမျိုးကျောက်တွေက မြန်မာနိုင်ငံမှာ အများဆုံးပဲလေ ကျုပ်လည်းမြန်မာဆိုတော့ ၀တ်ချင်တာပေါ့ဗျာ။ ကျုပ်လည်း ပိုက်ဆံစုအုံးပ။ ၀န်ကြီးတွေလိုတော့ ဘယ်ဟုတ်မလဲဗျာ။ ကိုယ့်ရှာတဲ့ပိုက်ဆံနဲ့ကိုယ်ဝယ်ရမယ်ဆိုတော့ မဟားတရားကို စုဝယ်ရမှာ။ ၀တ်နိုင်ပါ့မလားတောင်မသိ။